लेभान्टेद्वारा बार्सिलोना २–१ ले पराजित
पुष २७, २०७५ BNNTV
एजेन्सी , स्पेनिस कोपा डेल रे फुटबलको प्रि–क्वाटरफाइनलको पहिलो लेगमा बार्सिलोना लेभान्टेसँग पराजित भएको छ । कोपा डेल रे अन्तगत बिहीबार राति भएको खेलमा घरेलु टोली लेभान्टेले बार्सिलोनालाई २–१ ले पराजित बनाएको हो । लेभान्टेको जितमा इरिक कावाको र बोर्जा मायोरलले गोल गरे । पराजित टिमका लागि फिलिपे कौटिन्होले एक गोल फर्काए ।
बार्सिलोना सम्हालिन नपाउदै घरेलु टोलीले खेलको चौथो मिनेटमा नै इरिक कावाकोको गोलबाट खेलमा अग्रता बनाएको थियो । उनले रुवेन रोचिनाको पासमा गोल गरेका थिए ।
१४औं मिनेटमा रियल मड्रिडबाट लोनमा लेभान्टे पुगेका बोर्जा मायोरलले गोल गरेपछि घरेलु टोलीले बार्सिलोनाविरुद्ध २–० को अग्रता बनायो । मायोरलले इमान्युयल बोएटिङको पासलाई गोलमा परिणत गरेका थिए ।
२ गोलले पछि परेपछि बार्सिलोनाले घरेलु टोलीमाथि दवाव सिर्जना गरेपनि गोलका लागि दोस्रो हाफ नै कुर्नुपरेको थियो । खेल सकिन पाँच मिनेट बाँकी रहँदा फिलिपे कौटिन्होले पेनाल्टीमार्फ गोल अन्तर घटाएपनि त्यसपछि थप गोल निस्कन नसक्दा बार्सिलोना पराजित हुन पुग्यो । दोस्रो लेग १८ जनवरीमा हुँदैछ ।
प्रकाशित : शुक्रबार, पुष २७, २०७५१०:१९
विश्वकप छनोट यात्रा : मलेसियामाथि नेपालको सहज जित !
एसिया कप छनोट – वर्षाका कारण नेपाल र मलेसियाबीचको खेल अझै शुरु हुन सकेन !
मोनाकोमाथि पीएसजीको ४ गोल, काभानीको ह्याट्रिक
सन्दीपको दिल्लीले यसपटक आईपीएल जित्ने सक्ने ! यी हुन् दिल्लीले आईपीएल जित्ने ४ आधार !
विश्वकपको अन्तिम १६ मा कुन-कुन टिमबीच हुँदैछ भिडन्त ? हेर्नुस् कहिले हुँदैछन् खेलहरु..[ समय र खरल तालिकासहित ]